Yaa gar-wadeyn ka ah kulamada Farmaajo iyo Kheyre? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa gar-wadeyn ka ah kulamada Farmaajo iyo Kheyre?
Sida ay KON, u sheegeen ilaha xog ogaalka ah ee noo xaqiijiyay jiritaanka is aragga, labada Musharrax, waxaa socda, qorshe Kheyre looga gudbinayo wareegga 1-aad, si wareegga 2-aad cododka Farmaajo u aadaan dhankiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa sii xoogeysanaya wararka sheegaya in Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre uu dhowr jeer oo kala duwan 10-kii cisho ee la soo dhaafay, uu Madaxtooyada kulamo qarsoodi ah kula yeeshay Madaxweynihii hore Farmaajo, markii ugu horeysay tan iyo markii xilka laga qaaday bartamihii 2020.
Warkaan oo labo maalin ka hor si hoose loogu dusiyay saxaafadda ayaa biyo qabow lagu shubay, hayeeshee, Keydmedia Online, oo dabagal ku sameysay jiritaanka arrinkaan, ayaa ogaatay, in RW Kheyre uu ugu yaraan saddex kulan iyo is-maqallo kala duwan oo dhanka taleefanka ah la qaatay Farmaajo iyo wakiillo ka socday eedeysane Fahad Yaasiin.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, ayaa sheegaya in wadahadallada qarsoon ay garwadeen ka ahaayeen Koox diimeedka Al-ictisaam oo garab socota Dowladda Qatar, waxayna labadaas daraf soo jeediyeen in diiradda la saaro xoojinta wada shaqaynta ololaha labada Musharrax, [Farmaajo iyo Kheyre] lana dajiyo qorshe lagama laabtaan ah.
Kooxda Al-Ictisaam ayaa saameyn weyn ku leheyd siyaasadda dalka shanti sano ee la soo dhaafay, culimada garantoorka u ah koox diimeedkaas, ayaana rumeysay in uu fashilmay Farmaajo, waxayna doonayaan in ay baddelkiisa kursiga ugu sarreeya dalka saaraan, iyadoo xilligaan sare u qaadaya fursadaha Xasan Cali Kheyre.
Sida ay KON, u sheegeen ilaha xog ogaalka ah ee noo xaqiijiyay jiritaanka is aragga, labada Musharrax, waxaa socda, qorshe Kheyre looga gudbinayo wareegga 1-aad, si wareegga 2-aad cododka Farmaajo u aadaan dhankiisa, waana sababta ugu weyn ee hoggaanka Al-ictisaam ugu istaageen, in dhinacyadu is arkaan ballanna meel la wada dhigo.
Xoguhu, waxa ay intaas ku darayaan in Qatar iyo Al-Ictisaam, ay cadaadis saarayaan qaar ka mid ah musharrixiinta aan saameynta buuran lahayn, si ay xulafo ula noqdaan Kheyre, waxaana dhowr musharrax loo soo jeediyay in ay ku biiraan ololaha Ra’iisul Wasaarihii hore, hayeeshee, ilaa hadda ma jiro musharrax si cad u aqbalay soo jeedintaas.
Farmaajo iyo Kheyre, waxa ay shan sano ahaayeen isku saf, ku fadhiya labada kursi ee ugu sarreeya dalka, waxaana jira tabashooyin xooggan oo laga tirsanayo, gabood-fallo siyaasadeed oo ay xilligaas geysteen, yeelkeede, hadda waxa ay mar kale, doonayaan isku abaal-gud, xilliga doorashada, maadaama duruufahoodu isku mid yihiin.
Inkastoo Kheyre labadii sano ee na-weydaaratay lagu tirinayay dhanka mucaaradka haddana, cabsida ugu weyn ee Qatar & Al-ictisaam qabaan ayaa ah, in dadaalkooda ay waxba kama jiraan ka soo qaaddo dabeysha is-baddel doonka, maadaama la aaminsan ayhay in uusan guul dhadhamin doonin qof Qatar iyo Kooxda Farmaajo la safan.